Archive du 13/04/2012
Ranaivoson Henri Roger �Tsy vonona hiaraka hiasa ny FAT�
Iray amin�ireo olona akaiky ny filoha Marc Ravalomanana Atoa Ranaivoson Henri Roger. Tsy dia re ny tenany tato ho ato, izy rahateo miasa any ivelany. Nohararaotin�ny Tia Tanindrazana anefa ny nisokela taminy amin�izao fandalovany eto an-tanindrazana izao.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Tapitra ny fiala-nenina
Fiala-nenina iny natao iny, hoy ireo mpikambana eny anivon�ny Kongresin�ny tetezamita avy amin�ny ankolafy Ravalomanana, izay nivoaka ny trano fivoriana teny Tsimbazaza omaly.
Ako sy feo teny Tsimbazaza
Tsy anisan�ireo nandany an�ilay volavolan-dal�na mikasika ny famotsoran-keloka omaly, teny amin�ny Lapan�i Tsimbazaza, ireo CT avy amin�ny ankolafy Ravalomanana. Ireo mpikambana 51 ankoatra ny filohan�ny Kongresin�ny tetezamita ireo nivoaka ny efitrano fivoriana ireo izay narahan�ny CT hafa avy amin�ny Monima/UAMAD sy vondrona parlemantera hafa satria nahatratra 62 ny fitambaran�ireo nivoaka ireo.
Tsy dia mahagaga firy raha mbola malaina ny ho avy eto amintsika ireo mpampiasa vola vahiny, ary tena mihisatra ny fahatongavan'ny fanampian'ny avy any ivelany, satria tena gaboraraka tanteraka ny eto Madagasikara ary anjakan'ny varomaizina sy ny trafika isan-karazany.
CT Tinoka Roberto
�Nanaja ny maha filohan�ny Kongresy azy i Mamy Rakotoarivelo�
Niziriziry tamin�ny heviny
Niziriziry tamin�ny heviny hatramin�ny farany ka fototry ny fivoahan�ny ankolafy Ravalomanana ny efitrano omaly ary tsy nandraisan�izy ireo anjara tamin�ny fifidianana ilay volavolan-dal�na mikasika ny famotsoran-keloka ho any amin�ny fihavanam-pirenena ny minisitry ny fitsarana, Razanamahasoa Christine.
Mitifi-tena ny FAT
Dom-bera tao amin�ny Caf�t�ria Tsimbazaza no nandraisan�ireo mpiara-dia amin�ny FAT ny fandanian�izy ireo samirery ilay volavolan-dal�na laharana 007/2012 tamin�ny 27 martsa 2012 momba ny famotsoran-keloka ho an�ny fampihavanam-pirenena, natao tao amin�ny Kongresin�ny tetezamita omaly.
Printsy Razafitsiandraofa Jean Brunelle
Tsy mitsaha-mitontongana ny fiarahamonina Malagasy
Miteraka fieritreretana lalina ho an�ireo Mpanjaka avy any amin�ny Foko Antanala amin�izao fotoana izao ny fitotongan�ny fiarahamonina Malagasy ka itadiavan�izy ireo vahaolana.
Vondrona parlemantera TGV
Niezaka nandala ny fihavanana
Taorian�ny zava-nisy teny amin�ny Lapan�i Tsimbazaza omaly alakamisy dia nanana ny heviny ireo CT ao amin�ny vondrona parlemantera TGV. Ilay izy moa izany, araka ilay hitantsika teo, dia nandeha ilay fifidianana tsy maintsy misy ny mpandresy ary tsy maintsy misy ny resy ka ny ankolafy Ravalomanana izany rehefa tonga teo amin�ny andininy faha-5 misy ny resaka singa tsy ahazoana famontsoran-keloka dia nangataka nivoaka ry zareo,hoy ny CT Andriamalala Mamy Freddy.
Ady amin�ny kolikoly
Manana paikady ny Boriborintany Voalohahy
Ireo vondrom-bahoakam-paritra, izany hoe ny Faritra sy ny Kaominina ary ny Boriborintany no aharasain�ny Bianco fitarainana noho ny kolikoly be indrindra.
Fanafihana amin�ny RN7
Tezitra ny zandary
Tezitra mafy ny zandarin�Antsirabe manoloana ny fanelezana vaovao tsy marina ataona haino aman-jery eto an-drenivohitra ka namoaka fanambarana manohitra izany ho an�ny mpanao gazetin�Antsirabe.
Fanesoana ny Malagasy
Rabetahiana Parfait Pascal
�Hohajaina ny datim-panadinana rehetra�
Raharaha anisan�ny mitana ny sain�ny maro ny olana miseho lany eo amin�ny sehatry ny fanabeazam-pirenena. Nanamarika izany ny fitokonan�ny SEMPAMA sy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana izany, ny mety fiantraikany amin�ny fanadinam-panjakana. Toy izany koa ny fisian�ny DREN roa amin�ny Faritra sasany sy ny fisian�ny mpitrandraka volamena eo an-tokotanin-tsekoly iray ao Masomeloka Mahanoro. Vahinin�ny Tia Tanindrazana anio Rabetahiana Parfait Pascal, Sekretera jeneralin�ny Ministeran�ny fanabeazam-pirenena, mitondra fanazavana.
�Force One 3�
Nilaza ny ho afa-po tamin�ny sidina voalohany natao tamin�ilay fiaramanidina Airbus A340-300 i Andry Nirina Rajoelina sy ireo manampahefana naira-dia taminy, rehefa nigadona teny amin�ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato omaly tamin�ny valo ora maraina.